Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa, Itoophiyaafi Afrikaati. Magaalaan kun misooma, qulqullinaafi magariisummaan akkasumas bareedinaafi ammayyummaan magaalota biyyattii qofaaf osoo hintaane magaalota Afrikaatiifis fakkeenya gaarii ta'uutu irraa eegama.
Haata'u malee waanti qabatamaan magaalattiitti mul'achaa jiru faallaa kanaati. Lageen magaalattii keessa yaa'an balfa dhangala'oo xuraa'aa mana fincaanii keessaa ba'u akkasumas balfawwan adda addaa kanneen akka haaylaandii, feestaalii, guuranii yaa'u. Tubboon lolaas balfawwan adda addaan waan duudaniif lolaan kallattii gadilakkisee daandiiwwan irra yaa'uun magaalattiitti baratameera.
Keessumaa lolaan irraangadee Araat Kiiloo yaa'u ganna guutuu namni akka daandiirra hindeemneefi karaa akka hinqaxxaamurre taasisaa ture; ammas taasisaa jira. Sababa kanaan namoonni utuu karaa qaxxaamuranii lolaa keessatti kufan, daandii qaxxaamuranii geejjiba qabachuuf hanga lolaan darbutti taa'aniifi qarshii kaffalanii teessoo dargaggoonni kophee qulqulleessan dalga tarreessanirra darban hedduudha.
Kanneen kopheedhumaan lolaa sana keessa deemaniifi uffannaa ofii xureessaa deemanis lakkoofsa hinqaban. Irraangadee kana tubboon lolaa dhohee utuu hinsuphamin afaan banee taa'uu erga jalqabee torban tokkoo ol lakkoofsiseera.
Rakkoon kun uumamuuf sababa kan ta'e tubboon lolaa balfawwan adda addaatiin cufamuudha. Kanaan walqabatee lolaan ganna guutuu kallattiisaa gadilakkisee yaa'aa tureera; Ammas taanaan yaa'aa jira. Lolaan kallattii gadilakkisee yaa'uunsaa kun imala namootaarratti gufuu ta'uurra darbee balfawwan adda addaa haree daandii xureessaa jira. Rakkoo kana qaamni dhimmisaa ilaallatu maaliif callisee akka dhiise yeroo hundaa gaaffii natti ta'a.
Shiroo Meedaadhaa (Muujjaa) hanga Araatti kiilootti dhaabbilee guguddootu jiru. Fakkeenyaaf Embaasii Ameerikaa, Yunivarsitii Finfinnee, Hospitaala Yakkaatit 12, Yuunivaristii Finfinnee damee Saayinsiifi Teknolojii, Faarmaasiifi Saayinsii Uumamaa, Teessoo Phaaphaasii Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa, Ministeera Barnootaa, Mana Marii Bakka Bu'oota Ummataafi Waajjira Ministira Muummee kanneen kallattii daandii kana irratti argamaniidha.
Rakkoo lolaa kana isa lafa imalu qofa osoo hintaane kan konkolaataadhaan keessa darbu taajjabaa dinqifachaa keessa darba. Rakkoon kun maqaa gaarii biyyattiin qabdu kan balleessuufi guddina si'ataa biyyattiin galmeessisaa jirtu waliin deemaa waan hinjirreef qaamni dhimmisaa ilaallatu furmaata yeroos ta'e waaraa kennuuf dammaquu qaba.
Ani akka fakkeenyaatti Magaalaa Finfinnee keessaa bakka kana qofarratti xiyyeeffadhus naannawawwan hedduun rakkoo lolaa kanaaf saaxilamaniiru. Rakkoo kana furuuf ummatnis balfawwan adda addaa tubboo lolaa keessatti gatuurraa of qusachuu qaba.
Walumaagalatti, qulqullina, misooma, guddinaafi miidhagina magaalaattiif jiraattonnifi qaamoleen dhimmichi ilaallatu tokkummaan waliin hojjechuu qabu. Magaalota gama kanaan muuxannoo gaarii qaban mil'achuunis gaariidha.
Torban kana/This_Week 33654
Guyyaa mara/All_Days 1625449